Ny refy sy ny endrik'ilay Samsung Galaxy S8 sy S8 Plus dia voasivana | Vaovao momba ny gadget
Io no endrika sy refy an'ny Galaxy S8 sy S8 Plus
Raha misy zavatra tianao gaga amin'ny famolavolana ny Galaxy S8 ary Galaxy S8 Plus rehefa aseho amin'ny volana martsa izy ireo, dia vokatry ny fanjavonan'ny bokotra ara-batana ara-batana, izay nanome elatra ho an'i Samsung mba hampiakarana ny tahan'ny efijery-to-body hamela finday toa mahavariana.
Na dia amin'ireo fandikan-teny ireo aza dia azo atao ny mahita ny dikan'izany hoe manana terminal izay saika mandefa ireo bezel ary manaraka ny lalana nosokafan'ny Xiaomi Mi MIX. Ary ankehitriny dia manana ny famolavolana sy sary dimensional ny Galaxy S8 sy S8 Plus avy amina loharanom-baovao tena malaza.
Ireo mpandika teny ireo dia manome antsika efijery 18,5: 9, izay manamarina ny vaovao nomen'i Evan Blass tamin'ny herinandro lasa teo. Raha afaka manafoana ny bokotra ara-batana ara-batana dia hanana ireto finday roa ireto Lafin'ny tahan'ny 2: 1 antsoina hoe Univisium ary hanana izany koa ny LG G6. Ity karazana endrika ity dia ampiasain'i Netflix handraisana ny andiany voalohany.
Manana isika toerana vaovao ho an'ny scanner an'ny rantsan-tànana Tahaka ny voalazan'ny The Guardian tamin'ny famoahana azy ireo. Fitaovana fakantsary iray mitazona ny endrika elliptika an'ny S7 teo aloha.
Na dia ny fahagagana lehibe indrindra amin'ny S8 sy S8 Plus aza dia ny tahan'ny efijery mahavariana amin'ny toetran'izy ireo amin'ny fenitra Samsung. Amin'ny alàlan'ny fanesorana ny bokotra ara-batana sy hanafohezana ny vakana ambony sy ambany, sisa tavela amin'ny efijery lehibe kokoa isika eo amin'ny haben'ny frontal kely kokoa.
Ny loharano dia manamarina ny haben'ny 5,8 ″ sy 6,2 ″ ho an'ny S8 sy S8 Plus tsirairay avy, na dia nidina ho any amin'ny Note 7. ny refin'ny diagonaly eo amin'ny efijery dia lasa 5,6 ″ ao amin'ny Galaxy S8 ary 6,08 ″ ka hatramin'ny 6,2 ″ ao amin'ny S8 Plus.
Ny index index-to-body an'ny Galaxy S8 dia hametraka azy telefaona ambony ao amin'ny kilasiny raha ny momba izany metrika izany. Inona no mahatonga antsika hazoto kokoa hahalala ilay smartphone izay nahafahany nampihena ny bezela tamin'ny lafiny rehetra, teboka hametrahana ny Galaxy S8 eo afovoan'ny maso rehetra rehefa aseho amin'ny 29 martsa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Io no endrika sy refy an'ny Galaxy S8 sy S8 Plus
Samsung dia hanolotra Galaxy Tab vaovao ao amin'ny Mobile World Congress